Jidadkiisa oo dhammu aad u baahan tahay ogaan karaan inuu ku badbaadiyo / Lugood gurmad in aad maktabadda
Waxaa had iyo jeer ku wanaagsan yahay in ay sii hayaan dambeeyay ee files aad wixii user computer. Same waa kiiska la Lugood. Ilaa dib A waa si gaar ah muhiim sababtoo ah marka aad u malaynayso ku saabsan lacagta aad maal-aad hardware iyo software aad si toos ah in ay ogaadaan in aad u baahan tahay si loo ilaaliyo maal-aad.
Abuuritaanka Lugood ka xoq ka dib markii la isticmaalo ka mid ah, halka ilaa xad ah waa qarow qof walba ugu xumaa. Laakiin haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa had iyo jeer diyaarin doonaa xumaa, waxaad qaadi doono gurmad ah ee aad software. Waxaa jira siyaabo dhawr ah oo ay taageerto kor u Lugood Maktabadaha laakiin waqti isku mid ah waa in aad hubiso in aad sidoo kale dib ilaa ratings song, play dacwadood sameeyo.
Habka 1: Lacag Lugood ee drive ah External / Apple qalab by TunesGo
Habka 2: badbaadi aad Lugood Data ee computer kale
Habka 3: Backing ilaa xogta aad gubanaayo CD / DVD
Tallaabada 1 . Bilow syncing ka Playlists Lugood in aad rabto in aad nuqul ka si ah drive dibadda adag in qof kasta oo ka mid ah qalabka macruufka aad. Waxaad u baahan tahay in lagu xiro qalab macruufka si aad u computer iyo Lugood furan. No tuubada on View ka dibna Show galeeysid. Tubada ku saabsan qalabka macruufka ku galeeysid bidix oo taga si tab Music ah meesha ugu sareysa La Window ah. Dooro playlists aad rabto in aad u hagaagsan oo bilaabi iyaga syncing in aad qalab macruufka ah.
Tallaabada 2 . Jooji Lugood ee hore iyo ka dibna aad si fudud u ordi karaan MobileGo aad macruufka aad mashiinka. TunesGo ka socda in la aqoonsado aad iPhone oo keena in aad suuqa kala weyn. Item An sida "playlist" magacaabay noqon doonaa arki karo in aad.
Talaabada 3 . Hadda waxaad nuqul ka kartaa "playlist" u muujiyo oo dhan Lugood aad synced la habka macruufka. Opt ee playlists doonayo dooro saddexagalka hoos dhoofinta in. Waxaad dooran kartaa "Dhoofinta in My Computer." Save playlists kuwaas oo drive dibadda adag aad ku xirnayn in your computer.
Lugood sida caadiga ah ka badbaadiyay fikirina bixi ama soo iibsaday folder Lugood ee your computer. Waxaad si fudud shuban kartaa ah drive adag dibadda ama xataa drive USB ah in ay computer ka iyo inayna Lugood iyada soo gelin. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo aad leedahay si ikhtiyaar ah ee lagu badbaadinayo macluumaadka gal computer kale via TunesGo.
Tallaabada 1. Bilaabanaya barnaamijka
Tallaabada 2. Nuqul Lugood in this qalab Apple dibadda
Waxaad u baahan tahay si ay u wad si aad u "playlist" khaanadda tagay. Tani waxay keenaysaa in aad fool ka fool leh set oo ah fursadaha dhinaca midig. Tubada on the "Add" doorasho, taas furi doonaa dhibic hoos menu. Dhamaan playlists loo baari doonaa si toos ah, laakiin aad fursad u haysataa ee unchecking haddii aadan rabin in qaar ka mid ah. Tubada on "OK" iyo barnaamijka bilaabi doonaa geeddi-socodka lagu soo daabicida mid qalab in kale.
Tallaabada 3. Isku qalabka aad Computer cusub
Tallaabada 4. dhoofinta xogta si aad PC ama maktabadda Lugood.
Waxa kale oo aad qaadan kartaa gurmad ah xogta aad dhex gubanaya ah CD / DVD. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee geedi socodkan waxa weeye in aad ka heli kartaa video / files audio mar walba aad rabto in aad mishiinka ama laptop. Sidoo kale waa hab sahlan in ay qaataan gurmad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sida caadiga ah ma ka doorteen inta badan sababta oo ah markii ugu habka wax Guba CD / DVD cunaysa. Marka labaad, taas oo ku xiran ee maktabadda, tirada CD-aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in ay ku jiri karaan boqolaal. In kasta oo in, users ha gubi CD-ka Maktabada Lugood sida dib-up ee kiiska OS ah uu ku burburtay.
Waxaad raaci kartaa tallaabooyinka la siiyo si ay u tagaan oo ku saabsan geedi socodkan.
Tallaabada 1 . Marka hore aad leedahay si aad u furtid app Lugood ku computer ugu muhiimsan ee aad. Hadda abuuro playlist ah oo ka mid ah files audio aad rabto in aad CD
Tallaabada 2 . Gubasho digsi ka. Marka aad la sameeyo iyadoo talaabada ugu sheegnay, garaac "gabagabeeyay," ka dibna falgali soo Gudbiyay oo guji Guba playlist in disk.
Talaabada 3 . Tani waxay keeni doontaa in aad fool ka fool leh suuqa kala magacaabo goobaha Gubashada. Dooro gubi disk hadda.
Tallaabada 4 . Waxa aad dooran kartaa xawaaraha oo aad u baahan tahay si ay u gubaan CD ah. Tani waxay go'aamin doona wakhtiga ugu taas oo ay qaadi doonaan gubatay.
Talaabada 5 . Gali CD ah oo bannaan ee drive disk ah. Dooro ikhtiyaarka "furan Lugood," gubashadii ayaa ku soo bilowday. Lugood sida caadiga ah waxay muujinaysaa horumarka on sare ee suuqa kala app.
> Resource > Lugood > jidadkiisa oo dhammu waa inay badbaadi / Lugood ee kaabta in Your Library